Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Érythrée | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga
Topy Maso An’i Érythrée
Ny Vavolombelon’i Jehovah any Érythrée no iharan’ny fanenjehana mafy indrindra. Nogadrain’ny fanjakana foana izy ireo, nampijaliny, ary nampitahoriny, nanomboka tamin’ny 1993, tamin’i Érythrée nahaleo tena. Nisy didim-pitondrana navoaka tamin’ny 25 Oktobra 1994, izay nilaza fa “mandà ny zom-pireneny” ny Vavolombelon’i Jehovah any Érythrée satria tsy manao politika sady tsy manao miaramila. Nesorin’ny fanjakana tamin’izy ireo àry ny zo fototra amin’ny maha olom-pirenena azy.
Nihasarotra ny fiainan’ny Vavolombelon’i Jehovah nandritra ny taona maro nanenjehana azy ireo ka maro no niala tao amin’ilay tany. Mijaly kosa ireo nijanona tao amin’ilay tany ary tsy maintsy mitandrina be rehefa manao zavatra misy ifandraisany amin’ny fivavahany. Vavolombelona maro no efa nosamborin’ny manam-pahefana sy nogadrainy satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, na nandeha nivavaka, na niresaka momba ny Baiboly tamin’ny hafa, na noho ny antony tsy fantatra. Misy zokiolona ireo Vavolombelona migadra, ary indraindray aza misy ankizy. Lehilahy Vavolombelona telo no efa nigadra nandritra ny 20 taona mahery nefa tsy voampanga ara-dalàna. Tsy nisy tamin’izy ireo koa mba nandalo fitsarana.
Voamariky ny firenena hafa ny fanenjehana ny Vavolombelon’i Jehovah any Érythrée. Efa niresaka tamin’ny manam-pahefana any Érythrée ny manam-pahefana any Afrika, Eoropa, ary Etazonia, nefa tsy nanao na inona na inona ny fanjakana. Efa imbetsaka koa ny Vavolombelon’i Jehovah no nangataka hiresaka amin’ny manam-pahefana any Érythrée, any Asmara, mba handaminana an’ilay olana, nefa tsy mety hihaona amin’izy ireo ny manam-pahefana.